Hydraulic achiveura Machine
Hydraulic Press akamedura
FGSD Series Laser Kucheka With Size Large Workb ...
Sezvo boka kuti integrates R & D, kugadzirwa uye rokutengesa zvakasiyana siyana Laser chikumbiro michina uye CNC jira simbi kubudiswa michini, Jiangsu Yangming Technology Co., Ltd. yakavambwa nemakore anopfuura 15 ruzivo uye bhizimisi kero iri: Libao Industry Park, Hai ' ane City, Jiangsu Province. Zvinonzi nyore yaiva Shanghai awa rimwe zvoupfumi denderedzwa, uye akavharwa kuna Shenhai Highway uye Qiyang Highway.
zvigadzirwa Our inosanganisira: Plane Laser nokuveza muchina, Laser Welding muchina, Laser kupisa kurapwa uye zvichingodaro. Nguva ichangopfuura, isu zvakagadzira aida kuchinja otomatiki vachizvitakudza uye vachidzikisa wemuTesitamende mundege nokuveza, uye ane otomatiki dzaFord chaiparira uncoiling, munoenzanisa uye Laser okurwadzisa. It anosangana zvinodiwa nevamwe mukuru-mugumo mudzimba vatengi kupa munhu zvichienderana uye nyanzvi mhinduro zvakakwana Laser kugadzira makombiyuta.
Cnc Metal Sheet Router, Hydraulic achiveura Machine, Vertical Metal Sheet Groove Planer, router,